အားကစားတွေ အများကြီးထဲကမှ ယောဂ ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ် သင့်တာလဲ ? - Myanmarload
အားကစားတွေ အများကြီးထဲကမှ ယောဂ ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ် သင့်တာလဲ ?
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 11:08 July 22, 2020
လူတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစားတစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အားကစားမျိုးစုံရှိတဲ့အထဲမှ လူတိုင်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး အားကစားကတော့ ယောဂ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောဂ က အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား မရွေး၊ ကျားမ မရွေး၊ အချိန်နေရာ မရွေးဘဲ ကျင့်နိုင်တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း များစွာ အထောက်အကူ ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေရှည် ကျန်းမာရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ယောဂ ကျင့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ။
photo credit - pig tree
ယောဂ ကျင့်ခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများကိုပါ တဆက်တည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်နေဟန်ထား smart ကျစေတယ်
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်
သွေးတွင်းရှိ သကြားဓါတ်ကို လျော့ကျစေတယ်
သဘာဝအတိုင်း နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေတယ်
နှလုံးနှင့် သွေးကြောများစနစ်ကို အားကောင်းစေတယ်
ဖော်ပြပါ ကောင်းကျိုးများအပြင် အခြားသော ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများလည်း ရှိပါတယ်။ ယောဂကို မူကြိုကလေး အရွယ်မှစပြီး ပင်စင်ယူပြီး ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွားတွေတောင် သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ယောဂကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သွားခဲ့လျှင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်နိုင်မယ့်အပြင် ကျန်းမာရေးလည်း ဒေါင်ဒေါင်မြည်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းလေးတွေ မှားယွင်းနိုင်တာမို့ စစသင်တဲ့ beginner တစ်ယောက်အနေနဲ့ YouTube ကဖြစ်ဖြစ်၊ အခွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် မစမ်းကြည့်တာ ပိုပြီး သင့်တော်မယ်လို့ အကြံပေးပါရစေနော်။ ကဲ … အခုကစပြီး အားလုံးပဲ အနှေးနဲ့ အမြန် ယောဂ သင်တန်း တစ်ခုခုကို join လိုက်ကြပါစို့နော် …
သတင်းအရင်းအမြစ် - benefits of Yoga (YouTube)